Maxaa hortaagan in Soomali Heshiiso?
Dadka Soomaaliyeed oo marka dhinaca tirada la eego aad ayay uga yaryihiin shacabka ku nool magaalada Qaahira, marka baaxada dhulka la eegana haysta dhul hodan ah oo aad u wayn, marka dhinaca cunsurka la eegona ah dad isku af, diin, iyo midaba ah ayaa waxaa lala yaaban yahay waxa sababay colaadda qotada dheer iyo isgumaadka arxan daro, iyo waxa hortaagan in la helo heshiis dhab ah oo dhexmara shacabka Soomaaliyeed. Hadaba waxaan qormadeena kaga hadli doonaa dhowr qodob oo aan is leenahay waxay sabab u yihiin in lagu guud daraysto in la helo heshiis taabo gal ah.
Shirarka Dib u Heshiishiineed:
Shirarkii taxanaha ahaa ee la qabtay mudadii aan ka yarayn 15ka jeer ayaa noqday kuwo lagu guul daraystay in lagu soo afjaro colaada ciribta dheeraatay ee taala Soomaaliya. Shirkasta oo ka mid ah kuwaasna waxaa lagu so dhoodhaabaa wax loogu yeero dowlada ku meel gaarka ah ee Soomaaliyeed si markaasi loo qanciyo deeq bixiyayaasha looguna waramo caalamka in guul laga soo hoyiyay shirkaasi.
Shirkasta waxaa maamula, maalgeliya, goobjoogna ka ah awoodo shisheeye oo dano gaar ah ka leh Soomaaliya sida UN, US, EU, Midowga Africa iyo Jaamacadda Carabtaba. Waxaa xaqiiq aan cidina ka dahsoonayn ah in xafiisyada UN ee ku xididaystay Nairobi iyo ururada kale ee aan dowliga ahayn, kuwaas oo nafaqaysta dhaqaalihii loogu talagalay in lagu gargaaro maatada ku tabaalaysan Soomaaliya inaysan marna raali ka noqonayn in la helo heshiis waara iyo dowlad Soomaaliyeed oo taaba gasha, maxaa yeelay taasi waxay dhalin kartaa shaqada oo ka dhamaata iyo xafiisyada oo xidhma.
Sidoo kale waxaa jira dowlado ka faa’iidaytay dowlad la’aanta Soomaaliyeed kuwaas waxaa ka mid ah kuwa ku mashquulsan xaalufinta khayraadka badeed ee Soomaaliya, sidoo kale waxaa jira dowlado ka u isticmaala dagaalada Soomaaliya iyo Itoobiya istaraatiijiyo nololeed sida dagaalka dahsoon ee Biyaha wabiga Niil kaas oo ka dhexeeya Itoobiya iyo Masar. Intaa waxaa sii dheer wadamada kulaalaya sidii ay awood ugu helilahaayeen helista khayraadka batrool ee ku dihan dhulka Soomaaliyeed.
Intaa waxaa sii dheer in dowlad kasta oo deriska ah oo marti gelisa shirarkaasina ahdaaf dhow iyo kuwo dheer oo ay ka leedahay Soomaaliya ayay ku fushataa ama ugu sii gogol xaartaa shirarkaasi, had iyo goorna ruux ama koox ay isleedahay waad ka fushan kartaan ahdaaftiina ayay u ol’oleeyaan oo xukunka u dhiibaan. Sidaa awgeed yoolka wadamada derisku waa qaybi, isku dir oo xukun, dabadeedna dhaxal dhulka dihan ee gablanka ah oo aan dad u danqada haysan.
Iyadoo intaas oo arimood aysan inaga daahnayn, ayaa hadana shirkasta wixii ka soo baxa waxaa ummadda Soomaaliyeed gudo iyo dibadba ku soo dhaweeyaan qalbi hufan iyo rajo wanaagsan. Taas micnaheedu maaha in shacabku dhoohan yahay oo uusan dareensanayn tabcada lala damacsan yahay, deel qaafka iyo waxa aan cuntamin ee meesha lagu soo dhoodhoobay, balse danta guud iyo uboholyowgooda dowladnimo iyagoo ka turjumaya ayay ayidaan go’aamada shirarkaasi. Ilayn, DOWLAD XUMI DOWLAD LA’AAN BAY DHAANTAAYE!!!
Nasiib daro dowlad kasta intaysan hanaqaadin oo wakhtigii loo qabtay dhamaysan ayay fadhiid noqotaa ama kan hogaanka u hayaa heeryadiisa cune noqdaa ama baarlamaan iyo wasiiro ku sheegu ay darajo iyo faan moodaan majaro xaabin iyo fashilinta xilkii iyo shaqadii loo diray.
Abwaan Qamaan Bulxan ayaa wuxuu yiri:
Dullaal iyo mallaal wuxuba waa, Carabta deyntoode.
Sidaa awgeed geel ninkii lahaa dhici ama dowlad iyadu is tabcaynaysa waxaan fili inaysan cidna badbaadin karin.
Hadaba, inkastoo sababta fashilisay dowlad kumeelgaaryadii dhowrka ahaa ama sababta dib u heshiis waafi ah ay u dhici waayday, ayaa dadka qaar ku fasiraa oo daliishada qodobka kor ku xusan . Laakiin aniga waxaan rabaa inaan laydhka ku siraado qodob kaa ka muhiimsan , kaas oo aan is leeyahay wuxuu lafdhabar, halbowle iyo sababa u yahay soo afjaris la’aanta Colaada Soomaaliya, qodobkaasina waa inaan dib u heshiisiin dhab ah oo laga daacad yahay aysan Soomaliya ka dhicin cidina isagaba iman.
Dib u Heshiisiin Dhab ah:
Shir ku sheegyada la qabtay kama duwana nabar hoosta ka hurgumaya oo korka laga dhayayo, taasna waxa laga dhaxlaa waa in nabarkii ama dhaawacii uu soo rogaal celiyo, kaar, xanuun iyo xumad cusub oo kii hore ka darana la soo baxo, iyadoo goobtii buktay uu “infection” galo dabadeedna kaankaro iyo kud arinkii isku bedelo. Dhaawaciina gaaro heer aan waxba laga qaban Karin ilaa in la jaro waaxdaas quruntay mooyaane si loo badbaadiyo waaxyaha kale ee jirka intiisa kale. Sidoo kale kaankarada (cancer) hadii aan dhakhso loo jarin waxay ku fidaa waaxyaha kale ee jirka, martaana halbowlayaasha dhiiga taas oo keeni karta in qofku aakhirka u dhinto.
Weli ma dhicin in shir ka mid ah shirarkaasi lagaga hadlo sidii looga xisaabtami lahaa, la isaga xaalmarin lahaa, laguna xabaali lahaa dhibaatadii dhexmartay Soomaali, taas oo xasuuq arxan daro loogu gaystay dad tiradoodu ku dhowdahay 1 Milyan oo qof oo maato iyo maxaysato isugu jirta, lagu baro kiciyay malaayiin kuwaas oo 18 sano ka dib weli silic iyo saxariis ugu dhinta baddaha caalamka, saxaraaga liibiya iyo Suudaan, bushashka suweto, xeryaha qaxootiga ee ifo, dhadhaab, yeman, lafoole, boosaaso, hargeisa, iwm…..
Weli ma dhicin in laga xaaltamo dulmigii loogaystay qabiiladda laga tiro iyo tabarta badan yahay kuwaas oo deegaanadooda xooga lagu haytay 18kii sanadood ee la soo dhaafay. Weli ma dhicin in laga xisaabtamo shacabkii loo adeegsaday awoodii ciidan ee xooga dalka kuwaas oo diyaarado iyo dabaabaadkana lagu garaacay, Weli ma dhicin in laga xisaabtamo sidii loo soo celin lahaa hantidii qaran iyo tii shacab, taas oo ay dad doonayaan inay sidaa ku xalaal sadaan.
Weli ma dhicin in laga doodo waxa laga yeelayo dadkii dulmigaasi gaystay ama taageerada maadiga iyo mida macnawiga ahba la garab istaagay gabood falayaashii xasuuqa ku sameeyay shacabka Soomaaliyeed , arxan laawayaashii kufsaday qaranimadii Soomaaliyeed, xaalufiyay dhirtii iyo dalagii, suntana ku aasay badaha iyo beriga Soomaliyeed.
Sidaa awgeed, ilaa Soomaali dareento tiiha aan ku jirno waxa sababay, waxa dowladnimada inaga hortaagan, waxa inaan heshiino caqabada ku ah, fili mayo in aan arki doono Dowlad lagu diirsado, hana qaada, midnimo, dowlad qaran taas oo ka wayn qabyaalad iyo qoqob, maxaa yeelay Hal xaaraan ahi nirig xalaal ah ma dhasho. Hadii aasaaska dowladaasi laqdabad iyo siyaasado dahsoon oo aan daacad laga ahayn lagu dhiso wixii laga dhaxlaaba waxay noqon fashil iyo taladii oo geed intii ka sii dheer lagu laalo.
Islaamku waa xal, waase goorma:
Waxa kaliya oo duliga iyo duruufahaas adag dalka ka saari lahaana waxay ahayd diinta xaniifka ah ee Islaamka,taas oo ah waxa kaliya ee soomaali ku midaysan tahay, taas oo ah diin Eebe uu u soo diray in dulmiga ciribtirto, dulmanaha u gargaarta, daalinka qabato, xaqa iyo samaha u gargaarto, eex ka dheer, qabyaalad ka dheer, inagaa isla hebel ahna ka wayn. Waa diin ku salaysan Eebe hadalkiis iyo xeer iyo fariin ka timid abuuraha aadanaha kuna socoto adoomadiisa. Sidaa awgeed su’aali kama taagna in Islaamku xal yahay. Waxaase su’aali ka taagan tahay Islaam caynkee ah.
Ma islaamka la afduubay oo lagu dulmo maatada iyo maxaysatadaa, ma islaamka lagu gowraco looma ooyaanka laguna badbaadsho daalimka kula tolka ah baa, ma islaamka ay shukaanta u hayaan baa kitaabgaabyada aan faqhiga iyo axkaamta fahamsanayn baa, ma islaamka shaatiga looga dhigaybaa ulajeedooyinka qabyaaladeed iyo ahdaafta dhulbalaarsi baa. Waxaan filayaa jawaabtu waa maya.
Soomaalidu waa dad kuligood Muslim ah, kuwaas oo dhamaan ku dhaqma diinta islaamka, qadariya mabaadida Eebe, xushmeeya culimada, isku mehersada, isku dhaxla iskuna xukuma Diinta Islaamka , wixii ka khaldan ama ay ka gaabiyaana lagu fahamsiin karo caqli celin iyo dariis suuban kaas oo ku salaysan Hadalka eebe ee ahaa: “Dadka ugu yeera jidka Rabi idinkoo adeegsanaya Xigmad iyo Waano Wanaagsan” Nabigeena Suuban nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee isaguna wuxuu dadka u istaagay inay jamaahiirta waaniyaan kula dardaarmay xadiiska “Fududeeya oo ha adkaynina, u bishaareeya oo dadka hakala eryina”
Diinta xaniifka ah ee Islaamku waa diin qofkasta martabada iyo mansabka uu ku haboon yahay dhigta, waa diin aan jajuub iyo caga juglayn ku iman balse quluubta oo la kasbado, maatada oo loo dhibriyo ku timid. Mushrikiintu waxay nabigeena Suuban ku oran jireen “ Fiiri diintani waa mid danyarta iyo laangaabka loogu tala galaye”, yacni dadka masaakiinta ah iyay ula eedaan.
Sidaa awgeed, waxaan qabaa in kaarkii ugu danbeeyay ama shaygii ugu danbeeyay ee samata bixin lahaa dhibaatada Soomaaliya taalay oo ahaa Islaam in jaahiisii, sharafkiisii iyo cisadiisii ay rag afduubeen, kuwaas oo aad moodid inay yihiin adeegayaal dano shisheeye, balse aan marna eegayn danta guud ee shacabka Muslimka ah kuwaas oo u hamuuman cadaalad, sinaan iyo haykal dowli ah.
Soomaalidu waxay tiraahdaa kor waayeel waa wada indho, sidaa awgeed waxa socda shacabku wuu arkaa, kamana quusan raxmada Eebe. inta dareenkaas iyo rajadaasi jirtana wali quluubta shacabku way noo shahay.
Waxaan maqaalkayga ku soo gaba gabaynayaa sheekadan:
Mas iyo nin marti ah oo colaadi dhexmartay
Waxaa la yiri nin iyo wiilkiisii madiga ahaa baa socdaalay, iyaga oo meel maraya ayaa mas lugta ka qaniinay wiilkii isagoo u dhintay suntii. Ninkii ay damcay inuu dilo maskii, hayeeshee godkisii dheeraa ayaa maskii ku cararay. Ninkii wiilkii buu aasay oo inta gudin afbadan soo qaatay ag farsiistay maska godkiisii, isagoo doonaya inuu dilo markii uu soo baxo.
Muddo ka dib ayaa maskii madaxa kala baxay godkii oo eegay bal in ninkii tagay iyo in kale. Markaas ayaa ninkii gudintii is yiri madaxa kaga dhufo masta, nasiib wanaag maskii godkii ayuu dib ugu cararay kana badbaaday dilkii.
Ninkii ayaa maskii ku yiri war masow aan heshiino. Dabadeed maskii oo dareensan aanada iyo aarsiga uu ninku damacsan yahay ayuu yiri:
Ninyahow, inta aad madigaagii xusuusato aarsi iyo colaadi kaa bixi maysto, ana inta aan gudinta geedka ku dhaaban arkayo haka yaabin inaan ku aamino oo godka ka soo baxo.
Waxaan filayaa sheeko xariiradaas iyo waxa Soomaaliya maanta jira inaysan waxba kala duwanayn. Hadii aan laga xaaltamid, laga xisaabtamin, lana iska xaal marin dhibkii dhacay in heshiis yimaado waa mustaxiil.
Hooyada gablantay, Aabaha madigiisii xaqdarada lagu dilay, agoonta iyo looma oogaanku waxay arkaan dhibkii ku dhacay iyo cida sababtay, sidaa awgeed waa rajo kunool, dowlad iyo cadaaladna u ooman.
Kan daalimka ahina wuxuu ogyahay hadii dowlad iyo cadaaladi timaado inuusan ka baxsan doonin sixaabta iyo ciqaab, wuxuu ogyahay inuusan xaqdaro ku daganaana doonin guryaha islaameed iyo dhulka boobka iyo xasuuqa lagu keenay sidaa awgeed taladiisu waa jilaafo iyo ka hor imaad wax kasta oo haykal dowladeed u eg.